युवती चाहिएमा सम्पर्क गर्नुहोस् [ फोन नम्बरसहित ] – Sidha Post 24
काठमाडौं । अहिलेको अत्यन्तै व्यस्त समयका कारण मानिसहरूलाई आफ्नो बिहेको लागि पनि बर वा बधु खोज्नलाई फुर्सद हुँदैन । जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेजस्तै नेपालमा पछिल्लो समय बिहेलाई पत्रपत्रिका वा अनलाइनमा विज्ञापन दिने गरिएको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा दुईवटा त्यस्तै विज्ञापनहरू प्रकाशित भएका छन् । पहिलो विज्ञापन अनुसार ४२ वर्षीया डिभोर्स बधु अर्थात महिलाको लागि योग्य बर अर्थात बेहुला चाहिएको विज्ञापन आएको छ । यो सम्बन्ध कायम गर्न इच्छुकहरुले सम्पर्क नम्बर ९८२१८४३२८०34रहेको छ ।
अर्को विज्ञापनमा एमबीए अध्ययन गरेको बरलाई शाक्य, बज्राचार्य बधु चाहियो भनेर विज्ञापन राखिएको छ । यसका लागि सम्पर्क गर्नुपर्ने नम्बर ९८६५३८५६७६09 रहेको छ । यदी तपाईं पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने यी नम्बरहरुमा सम्पर्क गरेर आफ्नो कुरा अगाडि बढाउनु सक्नु हुन्छ ।
यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न तल थिच्नुहोस
खुसीको,, खबर ,,भागरथी पछि निर्मला घटनाले पनि,, लियो यस्तो मोड…
अविवाहित युवतीको संख्या बढेपछि प्रत्येक पुरुषले दुई वटा विवाह नगरेमा कडा सजाय !
म एउटा सिङ्गल केटी हु बिहे गर्ने रहर छ ! कोहि छ….
सुरुमा मजा लिएर हेर्छन अन्तिममा छि छी गर्छन: सरस्वती लामा